sagaing (34) in c-square •6months ago
ဒီနေ့ ကျွန်မ စာရေးသူ chirstonawba ၏ ပြေားပြချက်တွေနှင့် steemit & partiko applications နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရတဲ့ software လေးနဲ့အသုံးပြုခွင့်ရ ခဲ့ပါတယ် အစကတော့ မသိဘူးလေ သုံးချင်သလိုသာသုံးနေတာ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အကျိုးပြုမည့် ဆော့ဝဲတွေကိုဘဲ လေ့လာအသုံးပြုလာတော့တယ် ဒီဆော့ဝဲမှာလည်း အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ် အသုံးတက်ရင် အဆင်မပြေတာတွေလာရတယ် အရင်က photo copy ယူခွင့်ပြုထားတယ် အခုတော့မရတော့ပါဘူး cheetah boot /mack-bot ဒီနစ်ခုက လာပြီးဒုက္ခပေးတက်တဲ့အကြောင်း ပြေားပြတယ်သူလည်း down vote ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ hacker အကြောင်းတွေကိုပါပြေားပြလာခဲ့တယ် အထူးအားဖြင့် မိမိကို link တစ်ခု commant မှာလာပြီး tag ပေးရင် သွားမချိတ်မိဘို့အထူးလိုအပ်တယ် သူတို့က ဆွဲဆောင်ထားတယ် နေ့စဉ် up vote ပေးမယ် ဘာညာပေ့ါ သူလည်းသွားချိတ်မိသည့်နောက် နေ့စဉ်ဒေါင်းဘုတ်ကျွးခံနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြေားပြတော့ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိမိကိုယ်ပိုင်စာမူနဲ့ မူရင်းတင်တာကိုတောင် ဆက်ပြီး downvote က မိနေတုံးဘဲ ဒါဟာသက်သက် ဆော်နေတာ အကောင့်ပြောင်းသုံးမှအဆင်ပြေတော့တယ် အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်စရာကောင်းတယ် သူခမျာ စာမူတင်လိုက် ကျသွားလိုက်နဲ့အဆင်မပြေရှာဘူးတဲ့ သြော် နည်းပညာလည်းမတက်ရင်ေ ကြာက်စရာကောင်းတယ်နော် အထူးလေ့လာထားမှ လေထဲမှာလည်း သူခိုးတွေကများကြီးရှိနေကြောင်း မြန်မာမိသားစု steemit menber များတိုးတက်ကြပါစေ
c-square myanmar partiko artzone
6 months ago by sagaing (34)
Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have receiveda1.01% upvote from us for your 175 Partiko Points! Together, let's change the world!